Mabhuku eNzara mabhuku: shanduko yekunyora. | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Fikisheni yesainzi, Vanyori, Type, Literature, Novela, dzakawanda
Nzara Yemitambo mabhuku.
La yakabudirira uye inozivikanwa trilogy yeiyo mabhuku e Iyo Nzara Mitambo yakanyorwa naSuzanne Collins, munyori wemitambo weAmerica akaberekerwa muHartford, Connecticut, muna Nyamavhuvhu 10, 1962. Iye mwanasikana waJane naMichael Collins, murwi wemauto muUnited States Air Force. Akatanga zvidzidzo zvake zveDrama kuYunivhesiti yeIndiana, akazopedza kudzidza kwake kuNew York University.
Usati watsaura ne Iyo Nzara Mitambo (2008), Iyo Nzara Mitambo: Kubata Moto (2009) uye Iyo Nzara Mitambo: Kunyomba (2010), imwe yeakanakisa ekupedzisira masaga ezvinyorwa, Collins akagadzirawo nyaya dzevana dzemitambo yeterevhizheni. kubvira kutanga kwema1990. Izvi zvinosanganisira Bere diki y Nyaya yaClarisa.
1 Mireniyumu nyowani yeCollins: ngano, kukunda uye kuputsa
2 Kufuridzirwa uye kuronga kweMitambo yeNzara
2.1 Hurumende yehudzvanyiriri chaiyo
3 Kubudirira kwemabhuku
3.1 Iyo Nzara Mitambo (2008)
3.2 Iyo Nzara Mitambo: Kubata Moto (2009)
3.3 Iyo Nzara Mitambo: Mockingjay (2010)
4 Kusekwa, iyo bhaisikopo, kuvhara kusingafadzi
Mireniyumu nyowani yeCollins: ngano, kukunda uye kuputsa
Nekupinda kwemireniyumu nyowani Collins akanyora Gregor, akateedzana evana anotaurira inonakidza nyika izere nemakonzo uye zvipembenene zvinotaura uye zvakakamurwa kuita zvikamu zvishanu: Nzvimbo dzepasi (2003), Chiporofita Chechipiri (2004), Denda guru (2005), Chakavanzika chakasviba (2006) uye Chiporofita chekupedzisira (2007).
Sezviri pachena, Kuuya kweMitambo yeNzara mu cinema kwakaratidza shanduko muhupenyu hwaCollins. Kana trilogy yakaunzwa kuhwindo guru naGary Ross (2012) naFrancis Lawrence (2013, 2014 na2015), nyika yakazungunuka. Iyi yakanga isiri tsaona, saga yakaiswa nyeredzi neiyo stellar cast inotungamirwa naOscar anokunda Jennifer Lawrence.
Muna 2013 akaburitsa Gore Mugondo, nhoroondo yevana yakaratidza nhoroondo maanorondedzera zvakaitika kune musikana akamirira baba vake, akaendeswa kuhondo muVietnam. Suzanne Collins akange akaroora Charles Pryor kwemakore makumi maviri nematatu, kubva 23 kusvika 1992. Muchato wakabereka vana vaviri.
Kufuridzirwa uye kuronga kweMitambo yeNzara
Collins akataura mukubvunzurudzwa kwakasiyana siyana kuti akafemerwa nengano yaSpartacus. Munyori akapinzawo zvinhu kubva mungano dzechiGiriki nechiRoma senge ngano yaThisus. In consecuense, Iyo Nzara Mitambo ingano inorondedzerwa ine vatambi vezera repwere. Hunhu hwakaratidzirwa hwemakwikwi evaRoma gladiator akaendeswa kune isina chokwadi uye nguva yedyopopi zvinoonekwa. Kwete pasina zvisikwa zvake zviri mukati memabhuku akanakisa emangwana.
Chikwangwani chemufirimu «Iyo Nzara Mitambo».
Iyo rongero rinotarisa kurondedzera maitiro iyo PANEM hurumende inoranga kupandukira nechinotyisa terevhizheni chirango chegore. Rudzi rwunoumbwa nematunhu gumi nemaviri asara ehondo yenyukireya yapashure penyika yeAmerica yezana ramakumi maviri nemasere. Nechinangwa ichi, dunhu rega rega rinopa vaviri vechidiki vari pakati pemakore gumi nemaviri negumi nemasere, mukadzi nemurume (iwo mutero).
Vamiriri vedunhu rega rega vanotumirwa kunhandare kwavanorwira kusvika pakufa uye munhu mumwe chete ndiye anogona kurarama. Uyo anokunda kuratidzwa kweropa anopihwa mubairo nemari, imba iri nani uye hupfumi, zvisinei nemutengo wepanyama uye wepfungwa ungadai wakabatanidza kuwana kukunda kwakadai.
Hurumende yehudzvanyiriri chaiyo
Saizvozvowo, Suzanne Collins anotsanangura hurumende inodzvinyirira uye inodzvinyirira yeMutungamiri Snow, uyo anodzora huwandu hwevanhu kuburikidza nekutyisa uye neyakajairika chishandiso chevadzvanyiriri muhupenyu chaihwo: chikafu. Saizvozvo, iyo caste uye yemagariro kirasi system inofarira iyo yekushamisira mararamiro eCapitol nematunhu ayo epedyo kukuvadza zviwanikwa uye kugara zvakanaka kwenzvimbo dziri kure zvakanyanya.
Mukupesana, hazvigoneke kuti usanzwe tsitsi uye tsitsi kune protagonist, Katniss Everdeen, sezvo achizvipa iye se "mutero wekuzvidira" kuponesa munin'ina wake, Prim kubva pane kumwe kuuraya. Collins anoratidzira kuburikidza nehunhu hwake hunhu hwakasimba kwazvo hwakawanda nekubata misoro senge dzerudo, chiito, kufungira, kunyengera uye zvematongerwo enyika nenzira yakadzama uye inonakidza.
Iyo Nzara Mitambo (2008)
Mubhuku rekutanga, muverengi akabatwa nharo inokwezva: sunga makumi maviri nemana emunhu mukati meyakavharirwa yakagadzirirwa nemisungo yekufa, uko chinangwa cheumwe neumwe kuuraya vamwe vese. Chiitiko chepa terevhizheni chinoratidza musanganiswa wakakwana wehunhu uye hutsinye hwenzanga yeramangwana, asi nekufungidzira kwekunyepedzera pamusoro pehunhu hweruzhinji rwevazhinji.
Kuguma kusingatarisirwi kwechikamu chekutanga kunoratidza kushushikana kuri pakati paKatniss naPeeta. Vanoda kuzvipira pane kuurayana. Ichi chiito chinosimbisa kusaremekedza mafungire evanopokana mukutarisana nehutongi hune hutsinye.
Iyo Nzara Mitambo: Kubata Moto (2009)
Mubhuku rechipiri, chinangwa chaicho chesaga rese chinotanga kuburitswa: chimurenga, izvi anozviita nenzira isinganzwisisike. Zviito zvekuzvidza zveKattiss naPeeta zvakapa tariro kuvanhu vematunhu asina kuchengetedzwa neCapitol.
Zvichakadaro, chimwe chiitiko chinotyisa chinoiswa mukati medandare umo vakundi vemakwikwi akapfuura vanotora chikamu. Collins anokwanisa kunyatso kuendesa kumuverengi pfungwa yekuda kuronga uko zvese zvinotenderera paKatniss (iye asingazive zviri kuitika). Mumabhuku zano racho rinoburitswa munzira isinganyatsooneka kupfuura mumamuvhi.
Suzanne Collins, munyori weThe Hunger Games.
Iyo Nzara Mitambo: Kunyomba (2010)
Mubhuku rechitatu shanduko yakanyatsoburitswa. Katniss inoshandiswa nedivi rega rega kuzadzisa zvinangwa zvavo. Iyo zano inokanganisa inonakidza kwazvo. Kutanga, Peeta inorwisa Katniss nekuda kwekushungurudzwa kwepfungwa kwaakatambura asati anunurwa. Mushure meizvozvo, nguva isati yadonha Snow, Prim anourawa nekuputika.
Chechitatu, Snow anozivisa chokwadi kuna Katniss. Anomuudza kuti mabhomba akauraya hanzvadzi yake aive asiri iye odha, asi maCoin. Pakupedzisira, Katniss anotsiva kuna Coin, mutungamiri wemauto anopikisa hutongi. Izvi zvinoitika pakati peimwe terevhizheni yeruzhinji chiitiko apo miganho yehuipi hwevanhu inoramba iri pachena - zvakare zvakare.
Kuseka, iyo bhaisikopo, kuvhara kudiki kunonakidza
Kunyomba yakakamurwa kuita maviri mafirimu mafambiro akazoita zvishoma nezvishoma kufinha (kunyanya chikamu 2) apo dheneko rinoswedera pedyo. Nekudaro, izvi hazviitike mumabhuku nekuda kwekutaurisa kwavo kwakazara, kuzere nekushamisika kunogara kuripo. Kuenzaniswa, zvinyorwa zvacho zvinonyanya kufadza uye arc yemunhu wese arc yakanyatso kupedzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Fikisheni yesainzi » Mabhuku eNzara mabhuku